Wararka Maanta: Talaado, Aug 7 , 2012-Dowladda Uganda oo Soomaaliya u soo dirtay 28 sarkaal oo Ciidamada Cirka ah si ay gacan u geystaan sugidda Ammaanka Muqdisho
Dowladda Uganda oo Soomaaliya u soo dirtay 28 sarkaal oo Ciidamada Cirka ah si ay gacan u geystaan sugidda Ammaanka Muqdisho Talaado, Ogoosto 07, 2012 (HOL) — Dowladda Uganda ayaa sheegtay in 28-sarkaal oo ka tirsan kuwa ciidamada cirka dalkeeda ay u dirtay Soomaaliya si ay uga qayb uga qaataan sugidda ammaanka Muqdisho oo lagu wado inay dhammaadka bishan ka dhacdo doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya.
Ciidamadan ayaa waxay ku shaqeyn doonaan diyaarado kuwa qummaatiga u kaca ah oo ay leeyihiin ciidamada AMISOM ee ka socda Midowga Afrika, si ay dusha sare uga ilaaliyaan goobta ay ka dhacayso doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo ka dhici doonta Muqdisho bishan 20-keeda.
Taliyaha ciidamada Uganda ee UPDF-ta loo yaqaan, Jen. Aronda Nyakairima iyo taliyaha ciidamada cirka dalka Uganda, Jen. Jim Owesigire oo la hadlayay ciidamadan ka hor intii aysan kasoo dhoofin Kampala ayaa kula taliyay inay howshooda u gutaan sidii loogu talogalay.
"Howsha ciidamadan waa inay xoojiyaan howlaha kala duwan ee AMISOM ay gudaha Soomaaliya kawaddo," ayuu yiri Jen. Nyakairima oo intaas ku daray inuu rajo wanaagsan ka qabo inay howshooda u gudan doonaan si daacadnimo ay ku jirto.
Sidoo kale, taliyaha ciidamada Uganda wuxuu sheegay inay sharaf weyn u tahay dalka Uganda inay gacan ka geysato sidii uga caawin lahayd dowladda Soomaaliya sugidda ammaanka inta doorashooyinku ay socdaan.
Ugu dambeyn, Jen. Aronda wuxuu sheegay in sidoo kale saraakiishan ay xoojin doonaan ciidamada AMISOM oo qaybtooda ugu badan ay ka socdaan dalka Uganda kuwaasoo aan horay u lahayn ciidammo ka taageera howlgalkooda dhinaca cirka. Maxamed Xaaji Xuseen, Hiiraan Onlinemaxuseen@hiiraan.comMuqdisho, Soomaaliya
Talaado, Ogoosto 07, 2012 (HOL) — Wareegto kasoo baxday maamulka sare ee Xarakada Al-shabaab ayaa xilka looga qaaday gudoomiyihii hore ee Degmada Kismaayo Sheekh Xasan Yacquub Cali, iyadoona xilkaasi loo magacaabay Gudoomiye cusub. Ciidamada Dowladda iyo kuwa xoogagga Raaskaambooni oo dagaal kula wareegay deegaanka Biibi ee Gobolka Jubbada Hoose 8/7/2012 8:06 AM EST
Talaado, Ogoosto 07, 2012 (HOL) — Madaxweynaha Soomaaliya, Shariif Sheekh Axmed ayaa xalay kulan kula yeeshay madaxtooyada Somalia saraakiisha ciidamada DKMG ah iyo kuwa AMISOM, isagoo uga mahadceliyay guusha ay ka gaareen dagaalladii ay Muqdisho kula galeen Al-shabaab. Maamulka Gobolka Hiiraan oo ka hadlay khilaafka ka taagan soo xulida Xildhibaanada Gobolka uga mid noqonaya Baarlamanka soo socda 8/7/2012 3:49 AM EST
Talaado, Ogoosto 07, 2012 (HOL) — Iyadoo guud ahaan marka aad eegto khilaaf xoogan uu ka taagan yahay arinta ku saabsan soo xulista xildhibannada uga mid noqonaya gobollka Hiiraan baarlamaanka soo socda, ayaa waxaa arintaa ka hadllay mas’uuliyiinta maamulka gobolka. Ra'iisul Wasaaraha DKMG ah oo Maanta ku dhawaaqay inuu yahay Murashax u taagan xilka Madaxweynenimo ee Somalia 8/7/2012 3:21 AM EST